Etu ị ga-esi mee atụmatụ ihu igwe weebụ gị | Martech Zone
Friday, May 28, 2010 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 10, 2014 Douglas Karr
Kedu mgbe a ga-eme ya?
Nke a bụ ajụjụ na haunts m mgbe ị na-ekwuputa oru ngo. Would ga - eche mgbe m mechara nke a ruo ọtụtụ afọ na m ga - enwe ike ịkọwapụta ọrụ dị ka azụ aka m. Ọ bụghị otú o si arụ ọrụ. Ihe oru obula di ohuru ma nwee nsogbu nke ya. M nwere otu oru ngo nke na-iri abuo na mbubreyo nani n'ihi na obere mgbanwe mere site onye API na anyị enweghị ike ịrụ ọrụ. Onye ahịa ahụ na-ewute m - nke ọma - agwara m ha na ọ ga-ewe naanị awa ole na ole. Ọ bụghị na m ghara ụgha, ọ bụ na m na echetụbeghị na a atụmatụ ga-deprecated si API na anyị na-adabere. Enwebeghị m akụ iji mezue ịrụ ọrụ n'okwu a (anyị na-abịaru nso, agbanyeghị!).
Ekweghị m aga n'akụkụ nke ọzọ ma kwụọ ụgwọ awa karịa atụmatụ atụmatụ, n'agbanyeghị. Echere m na ịkwụ ụgwọ ọtụtụ awa na-agba ndị ọrụ ngo ume ka ha gabiga oge na mmefu ego. Ọrụ ọ bụla m na-akwụ onye ọzọ ugbu a ọtụtụ awa anaghị arụ ọrụ. Ha niile abịaghị n’oge, ọrụ ahụ na-enyekwa m nsogbu n’obi. Kama nke ahụ, ọrụ ndị ahụ akwụgoro m ụgwọ ego maka ọrụ abịawo n'oge ma karịa atụmanya. Ọ na-amasị m ịkarị atụmanya ndị ahịa m.
Emehie anọ nke ga-agbapụ atụmatụ gị ọzọ:
Akpa ndudue: Gbakọọ ogologo oge ọ ga-ewe gị ịme ihe onye ahia ya choro. Njọ. I mehiere ihe izizi gi wee mee atụmatụ ihe onye ahịa choro, obughi ihe ahịa chọrọ n'ezie. Ha abụọ dị iche na ndị ahịa ga-achọ okpukpu abụọ maka ọkara ọnụahịa ahụ.
Njehie nke abụọ: didn't wereghị oge onye ahịa ahụ chere. Tinye oge izu abụọ na ọrụ ahụ n'ihi na ngalaba IT ha agaghị enweta ohere ịchọrọ. M na-agbalị ịgwa ndị ahịa, ọ bụrụ na ị nweta "A" site na ụbọchị a kapịrị ọnụ, mgbe ahụ enwere m ike ịnapụta. Ọ bụrụ na i meghị, Enweghị m ike ịkwado ụbọchị ọ bụla. The Gantt eserese adịghị magically ịgbanwee, M ọzọ ahịa na ọrụ na-ama ndokwa.
Njehie nke atọ: I kwere ka onye ahịa gị kwanye gị tupu ị bunye gị ya. Didn't tinyeghi Njehie na nnwale. The ahịa chọrọ bee akwụ ụgwọ ya mere ha gwara gị ka ị nweta ya. Azịza na-ezighi ezi! Ọ bụrụ na ndị ahịa na-adịghị akwụ ụgwọ maka njehie-njikwa na ule, mgbe obi ike-obi ike na ị na-aga na-emefu ogologo awa na chinchi na mmezi fixes mgbe ị na-adị ndụ. Jụọ ya n'ụzọ ọ bụla - ị ga-arụ ọrụ ahụ ugbu a ma ọ bụ mgbe emechara.
Njehie nke anọ: Atụmanya na-agbanwe n'okporo ụzọ ahụ, usoro iheomume gbagwojuru anya, ihe kacha mkpa wee gbanwee, nsogbu bilitere nke ị na-atụghị anya ya, ndị mmadụ tụgharịrị…. Na-mgbe na-aga a otutu mgbe e mesịrị ka ị na-atụ anya. Ekwenyela na oge dị mkpirikpi n'okpuru nrụgide sitere n'aka onye ahịa. A sị na ị nọgidesi ike n’ihe ndị ị tụrụ anya ha na mbụ, ikekwe ị gaara eme ha!
N'oge na-adịbeghị anya, anyị malitere nkwekọrịta na ụlọ ọrụ ebe anyị kwenyere na ego ịkwụ ụgwọ maka ọrụ wee bụrụ ọnụego na-aga n'ihu kwa ọnwa maka nwelite na ndozi. Anyị nọdụrụ ala tụlee ihe mgbaru ọsọ na ihe ndị kacha ha mkpa - ọ nweghịdị mkparịta ụka onye ọrụ, imewe, ma ọ bụ ibe ọ bụla. Anyị debere ụbọchị 'ga-adị ndụ' nke na-eme ihe ike, mana Pat ghọtara nke ọma na ọrụ ahụ nwere ike ịga n'ihu na atụmatụ ụfọdụ karịa ndị ọzọ. Anyị kpọgidere mwepụta ahụ ma na-aga n'ihu na ndepụta nke nkwalite. Karịsịa, anyị abụọ nwere obi ụtọ.
Anaghị m afụ ọtụtụ atụmatụ mana ọ ka na-eme mgbe ụfọdụ. N'ezie, m na-akwado iweghachi nkwekọrịta na nso nso a n'ihi na, mgbe mụ na onye ahịa ahụ rụchara ọrụ ole na ole, amaara m na n'agbanyeghị na onye ahịa ahụ kwenyere ụfọdụ ebumnuche na-edoghị anya, ha agaghị enwe obi ụtọ ọ gwụla ma ha nwetara okpukpu iri ihe nkwekọrịta ahụ kwesịrị. Naanị m ga-achọ ka m hụ ndị folks mbụ. Ha mkpa ịgbazite ihe ha nwere site na oge elekere… ịbanye na atụmatụ atụmatụ ha na ha bụ ihe na-egbu mmadụ.
M na-amalite chepụta ihe jikọrọ ya na ọrụ ndị na-aga nke ọma anyị nyefere ma ọ bụ na-enyefe. Ọtụtụ n'ime ya ka m mụtara site na ya Ọzụzụ ahịa site na enyemaka nke onye nchịkwa m, Matt Nettleton. Achọpụtakwara m na ọtụtụ ihe ịga nke ọma nke ọrụ m amalitela tupu m bịanye aka na onye ahịa ahụ!
Esi ntu Atụmatụ:
Chepụta mgbe onye ahịa na-atụ anya ya. Ọ bụ ihe ha tụrụ anya ya kacha mkpa. I nwere ike ịchọpụta na i nwere otu afọ ị ga-arụcha ya. Gini mere ị ga-eji mee izu 2 ma ọ bụrụ na obi dị ha ụtọ na ọnwa abụọ? Ka nwere ike mezue ọrụ na izu 2 ma gafee atụmanya niile!
Chepụta kedu uru ọ baara ndị ahịa. Ọ bụrụ n’ịchọtaghị ihe ọ bara uru, yabụ chọpụta ihe mmefu ego bụ. You nwere ike mezue ọrụ ahụ ma gafee atụmanya dabere na mmefu ego ahụ? Mgbe ahụ mee ya. Ọ bụrụ na ịnweghị ike, hapụ ya.
Chọpụta ihe ihe mgbaru ọsọ nke oru ngo bụ. Ihe niile na-abụghị ebumnuche ahụ dị oke ma nwee ike rụọ ọrụ ma emechaa. Rụọ ọrụ iji setịpụ ihe mgbaru ọsọ ma mezue ihe mgbaru ọsọ ahụ. Ọ bụrụ na ebumnuche bụ ịnweta blọọgụ na ọsọ, wee bulie blog ahụ ma na-agba ọsọ. Ọ bụrụ na ọ bụ iwu njikọta na-eziga email, wee nweta ya ka izipu email. Ọ bụrụ na ọ ga-eme ka ọnụahịa nnweta belata, belata ọnụahịa ya. Ọ bụrụ na ọ bụ iji zụlite akụkọ, nweta akụkọ ahụ na-arụ ọrụ. Mara mma na-abịa mgbe e mesịrị ma na-ege ntị nke ọma nwere ike ịkwụ ụgwọ dị oke ọnụ yana usoro iheomume na-eme ihe ike. Rụọ ọrụ na ihe kacha mkpa.
Ọrụ azụ si ogo gị kacha mma. Imirikiti ndị ahịa m anaghị eji m maka ọrụ dị ala, ha na-enweta ego ha site na ịkụ m ihe maka nnukwu ihe ma ha mejupụta iji mezue ọrụ ahụ dị mfe. M hụrụ ndị ahịa n'anya ma achọrọ m ka ị gafee ihe ha tụrụ anya ma nye ha uru karịa na ha na-akwụ ụgwọ. Site na ngwụsị nke ọrụ anyị, anyị anaghị enwekarị mmefu ego ma ọ bụ na anyị gafee ebumnuche, anyị na-agakwa n'ihu oge. Ha na-enye m ohere zuru ezu iji gafere atụmanya ha… ọ dị mfe.
M ka na-enwe nrụgide iji belata ọnụego m ma mechaa n'oge gara aga, echere m na onye njikwa ọ bụla chere na nke ahụ bụ ihe mgbaru ọsọ ha bụ mgbe ha na ndị ọrụ ngo na-arụ ọrụ. Ọ bụ ihe ọjọọ na ha bụ ndị na-adịghị ahụ ụzọ. Naanị m na-eme ka ndị ahịa mara na obere oge na obere ego nwere mmetụta dị mma na ogo ọrụ ha goro m maka. Nnukwu ihe banyere ịkwụ ụgwọ nnukwu onye ọrụ ngo ihe ọ bara uru bụ na ọ ga-anapụta… ma ị nwere ike ịtụ anya na ọ ga-anapụta. Mgbe ị gara n'ihu igbutu ma ọ bụ tie ndị ọrụ ngo gị ọnwụ, ya ejula gị anya mgbe ọ dịghị onye n'ime ha mgbe arụ ọrụ. 🙂
M na-apụ apụ mgbe niile. Oge ikpeazụ ọ mere, ụlọ ọrụ ahụ kpebiri maka ihe ga-adịte aka na ha ga-emezigharị ya na ndị ahịa ọ bụla. Ọnụahịa m ruru ihe dị ka okpukpu 1.5, mana m ga-ewu ya ka ha wee nwee ike iji ngwa ahụ na ndị ahịa ha ọ bụla. Onye isi nchịkwa ahụ chịrị m ọchị n'ezie mgbe ọ gwara m ego ole ọ "zoputara" ya na onye ọrụ ọzọ (onye ọrụ ngo m tụrụ aro). Ndị ahịa anọ site ugbu a, ọ ga-akwụ ụgwọ ihe karịrị ugboro 3 ụgwọ mmejuputa ya. Igha
M mụmụrụ ọnụ ọchị, wee gawa onye ahịa m ọzọ nwere ọ happụ, nwee ọganiihu na ahịa.
Tags: atụmatụ oru ngousoro iheomumearụ ọrụ weebụọrụ webụsaịtịmkpokọta oru ngousoro iheomume webusaitiusoro iheomume
Mee 29, 2010 na 6: 58 AM
Doug kwuru nke ọma. Mụ na nke a ka na-alụkwa ọgụ. Mgbe a jụrụ m mgbe m nwere ike web saịtị dechara, Amụtala m ịzaghachi, “nke ahụ dabere n'otú ị si anabata ihe niile m rịọrọ.”
Mee 30, 2010 na 3: 58 PM
Enwere m ekele maka eziokwu gị, Doug. M ga - agbakwunye usoro kachasị mma - mee ka onye ahịa gị mara ya ma bụrụ onye na - egosi. Ihe ndị a niile nwere ụfọdụ ntụkwasị obi.